Naya Drishti | थप नयाँ फिचरका साथ आउँदै छ केटीएम ड्युक १२५, के के छन थप सुविधा ? - Naya Drishti थप नयाँ फिचरका साथ आउँदै छ केटीएम ड्युक १२५, के के छन थप सुविधा ? - Naya Drishti
थप नयाँ फिचरका साथ आउँदै छ केटीएम ड्युक १२५, के के छन थप सुविधा ?
पौष ०१, सल्यान । केटीएम १२५ ड्युक चाँडै नै अपग्रेड गरिने भएको छ । कम्पनीले यसको नयाँ फेमिली डिजाइन २०२१ मा लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हालै सो मोटरसाइकल एक डिलरशीपमा देखा परेको छ । यसको साथै नयाँ डिजाइन पुरानो मोडलसँग मिल्ने बाइक आउँदै छ । १२५ ड्युक स्पोर्टस् बाइक सबैभन्दा पहला २०१२ मा लन्च गरिएको थियो ।
२०२१ केटीएम १२५ ड्युकको बुकिङ पनि शुरु गरिसकेको छ । २०२१ केटीएम १२५ ड्युक हेर्दा २०० ड्युक जस्तो देखिन्छ । सो बाइकमा हेडल्याम्प डिजाइनको साथमा एलईडी डेटाइम रनिङ लाइटको साथै रिडिजाइन्ड फ्युल ट्यांक एक्सटेन्सन र नयाँ टेल प्यानल्सको साथमा उपलब्ध रहेको छ ।
नयाँ अपग्रेड पछि २०२१ केटीएम १२५ ड्युकको फ्युल ट्यांक क्षमता बढेर १३.४ लिटर पुगेको छ । हाल उपलब्ध मोडलमा १०.५ लिटर रहेको छ । नयाँ बाइक एलसीडी इन्स्ट्रयुमेन्ट कन्सोलको साथमा उपलब्ध हुनेछ र यस्तै युनिट २०० र २५० ड्युकमा पनि देख्न सकिन्छ । यद्यपि यसमा ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी देख्न सकिदैन । यसमा अलोय ह्वील, ह्यान्डलबार र सस्पेन्शन सेटअप पुरानो मोडल जस्तो समावेश गरिनेछ ।
सो बाइकको पावरट्रेन यो वर्षको अपग्रेड बीएस६ कम्प्लायन्स मोडल जस्तो रहेको छ । १२४ सीसी सिंगल सिलिन्डर लिक्विड कुल्ड इन्जिनको मदतले १४.३ बीएचपीको पावर र १२ एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । यसको साथै ६ स्पिड गियरबक्स २०२१ केटीएम १२५ ड्युकमा उपलब्ध रहेको छ ।
सो बाइकमा सिंगल च्यानल एबीएस स्ट्यान्डर्डको हिसाबले उपलब्ध रहेको छ । नयाँ बाइकमा पुरानो मोडलमा जस्तै फ्रन्ट र रियरमा डिस्क ब्रेक सिस्टम समावेश गरिएको छ ।
नेपाली बजारमा भने यो बाइक आउन केही समय लाग्ने छ । कहिले आउँछ भनेर अहिले नै अनुमान गर्न पनि सकिदैन । यो समाचार नेपाल अटोमा छ ।